Somali daily News – Dagaal xalay Baydhabo ku dhexmaray Alshabaab iyo Dowlada
Dagaal xalay Baydhabo ku dhexmaray Alshabaab iyo Dowlada
shingani October 22, 2012 0
(xamarweyne.com):-Waxaa xalay gudaha Magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal ara cuslaa kaasoo u dhexeeyay dagaal Al-shabaab ka tirsan iyo kuwa Dowlada kadib markii weerar lagu ekeeyay fariisin ciidamada Dowlada ay ku leeyihiin Baydhabo.
Dadka ku dhaqan baydhabo gaar ahaan kuwa u dhow halka lagu dagaalamay ayaa sheegay in dagaalku ahaa mid hubka nuucyadiisa kala duwan la isu adegsaday islamarkaana u socday waqti kooban.
“dagaalka wuxuu bilowday markii xoogag alshabaab ka tirsan ay gudaha magaalada soo galeen xalay saq dhexe ayna rasaas xoogan iyo madaafiicba ku bilaabeen saldhig ciidaamda Dowlada ay kaga sugan yihiin baydhabo taasina waxaa ay argagax gelisay dadkii ka agdhawaa halkaasi xili la hurdaayay “ayuu yiri mid ka mid ah dadii warbaahinta qaar u sheegayay waxa ay kala socdaan dagaalkii xalay.
Sida dadka deegaanku sheegeen waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray walow aan si rasmi ah warar madax banaan looga heyn sida uu khasaaraha u kala gaaray labada dhinac.
weerarka xalay waxaa uu qeyb ka yahay kuwo joogto ah islamarkaana ah nuuxa loo yaqaan weerarada ku dhufoo ka dhaqaaqda ah ayna adeegsadaan xoogaga alshabaab oo sanadkaani bilowgiisii isaga baxay baydhabo.
May 25, 2017, No Comments on Jaamacadda Soomaaliya Oo Shalay Magaalada Muqdisho Tababar Ugu Qabatay Qaar Ka Mid Ah Iskuulada Ka Howlgala Magalaada Muqdisho Iyo Nawaaxigeeda…